Email Kufarira Center uye Usazvinyora Mapeji: Uchishandisa Mabasa vs. Zvinyorwa | Martech Zone
Email Chinyorwa Chekuda uye Regedza Mapepa: Uchishandisa Mabasa vs. Zvinyorwa
Chipiri, Gunyana 29, 2020 Chipiri, Gunyana 29, 2020 Douglas Karr
Kwegore rapfuura, tanga tichishanda nekambani yenyika pane yakaoma Salesforce uye Kushambadzira Cloud kutama uye kuita. Pakutanga pakuwanikwa kwedu, takaratidza zvimwe zvakakosha maererano nezvavanoda - zvaive zvakanyanya kushanda-kwakavakirwa.
Kana iyo kambani ikagadzira mushandirapamwe, ivo vaizogadzira rondedzero yevanogamuchira kunze kwavo kwemaemail kushambadza chikuva, kurodha runyorwa kunge runyorwa nyowani, kugadzira email, uye kutumira kune iwo runyorwa. Dambudziko neiri nderekuti rakamisikidza matambudziko mashoma:
Rino rekuzvinyora peji raive rakawanda remazita ane asina ushamwari mabhuku ekudhinda ayo munhu anotenga aisanzwisisa.
Kana iye anogamuchira akadhinda kuzvinyoresa muemail, zvinongovasiya chete kubva pane iyo runyorwa iyo yakanga ichangotumirwa, kwete kubva pamhando yekutaurirana iyo uyo anotsiva aifunga kuti havasi kuzvinyoresa kubva. Icho chiitiko chinoshungurudza kune vako vanonyorera kana vakaramba vachigamuchira mamwe maemail erudzi irworwo.
Nemazita mazhinji pane iri risinganyore peji, vanogamuchira vanogona kupinda mu tenzi kuzvinyoresa panzvimbo pe mhando zvekutaurirana. Nekudaro, iwe urikurasikirwa nevanyori vanogona kunge vakanamatira padhuze kana iwe usina kuvashungurudza nezvinodiwa zvakagadzirirwa yako mashandiro kwete nekurudziro uye zvavanofarira.
Kuronga Yako Email Service Provider
Nepo vemberi CRM neemail vanopa sevhisi vachipa mukana wekuvaka nekugadzira tsika dzekufarira nzvimbo izvo zviitiko zvinoshamisa… masevhisi madiki anongoshandisa zvinyorwa kuronga peji rako rekunyora kana kunyorera peji.
Kana iwe usingakwanise kugadzira rako raunoda peji, gadzira yako mazita kubva pamaonero emunyori ne mhando yekutaurirana iwe yauri kutumira. Rondedzero dzinogona kuve zvinopihwa, zvekutsigira, nhau, matipi & matipi, maitiro-ekuita, zviyeuchidzo, rutsigiro, nezvimwe. Nenzira iyi, kana munhu akanyorera asingade kuwana zvimwe zvinopihwa - vanogona vachiri vakanyoresa kune dzimwe nzvimbo dzekufarira apo kuzvinyoresa ivo pachavo kunyanya kubva pane zvinopihwa zvinyorwa.
Mune mamwe mazwi, shandisa maficha epuratifomu yeemail zvakakodzera:
Lists - ndeyemhando yepamusoro mune zvakasikwa uye zvinopa iye anonyorera kuti asazvinyora kubva kune chaiwo marudzi ekutaurirana. Muenzaniso: Offers
Segment - akafuridzirwa zvidimbu zvemazita izvo iwe zvaungade kushandisa kugadzirisa kunongedza. Muenzaniso: Vatengi vepamusoro zana
mishandirapamwe - ndezvechokwadi kutumira kune chimwe kana chimwe chikamu uye / kana zvinyorwa. Muenzaniso: Yekutenda Kupa kune Vepamusoro Vatengi
Mune mamwe mazwi, kana ini ndaishuvira kutumira chipo kune vanhu vakashandisa zvinopfuura madhora zana papuratifomu yangu yeecommerce gore rino, ndaizo:
Add a munda we data, 2020_Spent, kune yangu Zvinyorwa Rondedzero.
Tumira iyo mari inoshandiswa neese anonyorera kune yako email chikuva.
Gadzira a Chikamu, Akashandisa anopfuura zana muna 100.
Gadzira yangu mameseji ekupa mu kambeyini.
Tumira mushandirapamwe wangu kune chaicho Chikamu.
Zvino, kana iye wekusangana achida kuzvinyoresa, ivo vanozove vasina kuzvinyoresa kubva ku Inopa Rondedzero… Mashandiro atinoshuvira kuve nawo.
Kuvaka A Role-Yakavakirwa Sarudzo Center
Kana iwe uchikwanisa kugadzira uye kuvaka yako yakasanganiswa sarudzo nzvimbo iyo inopa yakanakisa chiitiko:
Ziva iyo mabasa uye zvinokurudzira yevanonyoresa uye wozovaka iwo mireza kana sarudzo mune yako mutengi wehutano hwehukama chikuva. Panofanira kuve nekuenderana nemunhu mukati mesangano rako.
Dhizaina a peji rekufarira iyo inoenderana neyako kunyorera nemabhenefiti uye zvinotarisirwa zvinopinda mune iyo musoro kana nzvimbo yekufarira ichapa. Sanganisa peji rako raunofarira neCRM yako kuitira kuti uve ne360-degree maonero ezvinodiwa nevatengi vako.
Kumbira kunyorera kwako kakawanda sei vanoshuvira kuti vaziviswe. Iwe unogona kushandisa zuva nezuva, vhiki nevhiki, bi-vhiki nevhiki, uye makota emakesi sarudzo dzekuvandudza yako runyorwa kuchengetedza uye kudzivirira vanyori vanotsamwa kuti ivo vari kutambira akawanda mameseji.
Sanganisa yako kushambadzira chikuva kuitira kuti iwo misoro igadzirwe mumatanho akasarudzika aunogona kuganhura nekutumira mishandirapamwe kwavari, uchiri nani kubata vako vokukurukura uye kuenzanisa metriki kune kurudziro yemubhadhari.
Ita shuwa kuti iwe unayo iyo dhata zvinhu zvakabatanidzwa neCRM yako uye zvakawiriraniswa kune yako yekushambadzira chikuva kugadzira, kugadzirisa, uye kutumira kune zvakanangwa Zvikamu mukati mezita rako.
Govera a tenzi kuzvinyoresa padanho reakaundi futi muchiitiko chekuti munhu anonyorera anoda kusarudza kubva kune ese maratidziro ane chekuita nekutengesa.
Wedzera chirevo chekuti iye anotambira achazotumirwa mutengapwe kutaurirana (kusimbiswa kwekutenga, kusimbiswa kwekutakura, nezvimwewo).
Sanganisa yako zvakavanzika urongwa pamwe nechero ruzivo rwekushandisa data pane rako peji peji.
Pinza zvimwe Channels yekutaurirana, semaforamu enharaunda, yambiro yeSMS, uye mapeji enhau enhau anoteedzerwa.
Nekuronga uye kushandisa zvinyorwa, zvikamu, uye mushandirapamwe nenzira kwayo, hauzongochengetedze yako email sevhisi mushandisi interface yakachena uye yakarongeka, iwe unogona zvakare zvinoshamisa kuvandudza ruzivo rwevatengi kune vako vanonyorera.
Tags: mishandirapamweCRMemail metricsemail service providerListskushambadzira goresalesforcepeji yekunyorera
Hopin: Nzvimbo Yekutenderera Yekutengesa Kubatikana Kune Zviitiko Zvako Zvepamhepo
TxTFi: Gonesa Shopify Kugadzirisazve Via Meseji Meseji